Cali Shuute Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Cali Shuute Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
January 2, 2018 6:07 pm Views: 520
Rag hubeysan waxey qeybo ka mid ah degmada Dharkenley ee gobalkan Banaadir ku dileen sarkaal ka tirsan dowlada Ridada ee Farmaajo uu hogaamiyo.
Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cali Nuur Shuute kaasi oo ka tirsanaay saraakiil maamulka dowlada ee magaalada Muqdisho ugu magacaaban dhanka Waaxda dhul bixinta,waxeyna ragga hubeysan sarkaalkaasi ka toogteen qeybaha sare ee jirka.
Sarkaalkan lagu dilay degmada Dharkenley ayaa ah Aabaha dhalay sarkaalka dowlada Ridada ugu magacaaban gudoomiyaha Maxkamada Darajada Kowaad ee maleeshiyaatka dowlada Murtadka lagu magacaabo Gaashaanlle Sare Xasan Cali Shuute oo ah ninka Sawirkiisa kor uu ka muuqdo.
Mas’uuliyadda dilka sarkaalkan waxaa sheegtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waana sarkaalkii Labaad oo ka tirsan dowlada Farmaajo oo muddo Afar iyo Labaatan Saac gudahood ah Shabaabul Mujaahidiin ku dilaan gudaha magaalada Muqdisho.
Murtadkaan,murtadka uu dhaleyna wuu ku xigaa inshallah
murtad, murtad dh%%%%%%%%%.
xidigo buuba isku soo raray, sidii inuu kufriga ku waarayo, ilaahoow kii toogtey gacanta ha ka goyn, oo jannatu firdows ku abaal mari.